Iindaba -Ihlabathi leemoto kunye noomatshini ayifuni mpumelelo engaka
Ukuba umntu othile ukubuza malunga nezinto eziphambili ekuthengeni kwakho imoto, ungaphendula uthini?
Mhlawumbi uya kuthi ngaphandle kokucinga: ukubonakala, indawo, amandla, ubomi bebhetri.
Kodwa into endifuna ukuyithetha kukuba kuxinano olukhoyo lokuqhuba ngobukrelekrele, ndiyoyika ukuba inkqubo yomatshini wemoto nayo iya kuba kuluhlu lwakho lokuqwalaselwa.
Emva kwayo yonke loo nto, nokuba imigca iyarhwebesha kwaye irhabaxa kangakanani, bafuna ulwalathiso lobuchopho obukrelekrele.
Ukuba ubuyela kwiminyaka ye-1990 kwaye ubeke bucala izinto zakho ezingekazalwa, amagama athi "inkqubo yomatshini weemoto" ngekhe aphume emlonyeni wakho.
Uyazi, emehlweni olutsha olungenakubalwa olukhule kwii-1990s zakuqala, iPoussin ethe tyaba emantla nasemazantsi ulwalathiso lwentliziyo. Kwaye ukubonakala kwenkqubo yemoto yale moto ngokusisiseko kunje
INQWELO-MAFUTHA YENQWELO-MAFUTHA NE-NAVI YENKQUBO YEBMW 3 YOKUFUNDA E60 ABADLALI BEMULTIMEDIA NGOKUDLALA
Abahlobo bakudala bahlala besithi ubuhlwempu bunqande umcabango. Ukulula kwamaxesha kukwacutha ngokuthe chu ukulandela kwethu okuphezulu kweenkqubo zomatshini wemoto.
Ngelo xesha, sasingazi ukuba inkqubo yomatshini weemoto iza kuba njani, ke nokuba ibibuhlungu, singahlala sidakumbile. Emva kwayo yonke loo nto, besingakwazi ukucula ithoni enamandla necacileyo.
Kwimemori yexesha elifutshane, imoto iziqwenga ezithathu ezinkulu kunye neqokobhe kunye namavili amane; akuzange khe kubekho ubunewunewu bezinto zangaphakathi ezisongelwe ngaphakathi kunye nezihlalo zokuthambisa, kwaye izinto ezilindelweyo kwinkqubo yomatshini weemoto azithobeki ngakumbi: Mamela nje unomathotholo ngokucacileyo, nayo yonke enye into yibhayisekile.
INQWELO-MAFUTHA YENQWELO-MAFUTHA NE-NAVI YENKQUBO YEBMW X3 YOKUFUNDA F25 F26
Njengoko ixesha liguquka, isikrini siyongezwa kwimoto. Ngaphandle komzimba omncinci, ikwavula i-sunroof yokunxibelelana nemoto.
Ngokuvela kwescreen, ukuhambisa umkhondo kwaqala ukuvela (enyanisweni, ndiyabathanda abaqhubi beelori ngexesha ngaphandle kokuhamba), nangona ukuhamba ngelo xesha kungaze kucinge iingcinga zakho ezibuthathaka, kwaye awunakho ukuyalela ukunika imiyalelo kwimoto. Ubumnandi.
Ixesha lihambile. Kuko konke ukulunga, ukukhula kweenkqubo zomatshini weemoto bekukhawuleze kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye imikhosi emitsha yokwenza iimoto yasekhaya ithathe iinkqubo ezimibalabala nezipholileyo zomatshini weemoto njengeendawo zabo zokuthengisa eziphambili.
Kodwa ngokoluvo lwam, kanye njengombongo ovuselela umphefumlo awusoze ube yimfumba yeengxoxo eziphumelelayo, ngokufumba nje imisebenzi yeemoto kunye nomatshini kunye nokwandisa isikrini ngekhe kuphumelele kwintengiso.